विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन्, संसद पूनःस्थापना हुन्छ : बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई « News24 : Premium News Channel
विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन्, संसद पूनःस्थापना हुन्छ : बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
काठमाडौं, १७ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या नहुने बरु सरल र सहज व्याख्या हुनेछ भन्ने आफ्नो विश्वास व्यक्त गरे ।
आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? भनेर साथीहरुले प्रश्न गर्नुभयो, इजलाशमा रहनुहुने सबै न्यायाधीशहरुले संविधानको सपथ खानुभएको छ ।
आफूले खाएको संविधानको सपथविपरित हुनेगरि फैसला वा निर्णय हन्न भनेर हामीले कल्पना पनि गर्दैनौं । सम्मानित अदालतले संविधाअनुसार नै फैसला गर्छ । ओलीबाहेक सारा मुलुक यो विघटनको विरुद्धमा छ । प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी विरुद्धमा छ । संसारका जुरिष्टहरुले नेपालको घट्ना नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।
संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको प्रतिकुल फैसला गर्छ, भनेर कल्पना नगरौं । विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन् । बरु, सरल र सहज व्याख्या हुनेछ । संसद पूनःस्थापना हुन्छ ।’
त्यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आगामी फागुन १२ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म आउने पनि सुनाए । कार्यक्रमको सुरुवातमा भट्टराईले भने, ‘देव प्रसाद गुङको तर्फबाट सबैभन्दा धेरै कानून व्यवसायीहरू हामी थियौं, हाम्रो बहस सिद्दिएको छ ।
र, भोलिदेखि अरु चार वटा निवेदनहरु छन् (देव गुरूङबाहेकका) तीन निवेदनहरुमा बहस प्रारम्भ हुन्छ । मंगलबारदेखि सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ हुनछ । यसले अझै ८ देखि १० दिनको समय लिन्छ ।
त्यसपछि हामीले जवाफ दिन पाउँछौं । मेरो विचार र अनुमानमा फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म मुलुकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला प्राप्त गर्नेछ ।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मूलभूतः असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न पाँच कारणसमेत पेश गरे । उनले भने, ‘पहिलो कारण भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिनेगरि यो संविधान बनेकै थिएन । र, बनाइएकै थिएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै जोड गर्ने अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँहरुले बोलेका कुराको रेकर्डहरु बाहिर आएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि हो । उहाँहरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।’
त्यस्तै, उनले अर्को कारणमा स्वतः हुने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान नै नराखिएको सुनाए । भट्टराईले थपे, ‘स्वतः हुने अवस्था भनेको बहुमतको सरकार एउटा पार्टीले बनाउन सकेन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले पनि बनाउन सकेन, वा सबभन्दा ठूलो दलले पनि बनाउन सकेन ।
र, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि मेजोरेटी प्राप्त गर्न सकेन र तीस दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो स्वतः विघटन हुने हो । किनभने त्यो प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकेन् ।
तर, संविधानमा हामीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन हुने व्यवस्था राखेनौं ।’
त्यस्तै, तेस्रो कारणमा उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश पनि बलपूर्वक र सिफारिशलाई ग्रहण गरेर विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमपनि दुवै बलपूर्वक भएको सुनाए ।
अर्को कारण सुनाउँदै भट्टराईले भने, ‘संविधानको धारा ९३ मा ६ महिनाभन्दा बढी संसदबिहीन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यो हामीले विगतका अभ्यासहरुलाई हेरेर राखेका हौं ।
संसदको अधिवेशन छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक छ । र, राष्ट्रपतिले त्यति पनि संविधान हेरिदिनुभएन । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा हामी सबै लागेका हौं ।
राजतन्त्रको कालमा पनि गिरिजाको सिफारिश २ दिन राजाले होल्ड गरे, मनमोहनको सिफारिश पनि राजाले १ दिन होल्ड गरे, सूर्य थापाले गरेको सिफारिश ५ दिन होल्ड, (अदालतले मिल्दैन भनेकोले त्यो विघटन हुन पाएन) र देउवाको विघटन २ दिन होल्ड गरेको थियो ।
राजाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग परामर्श गर्ने भनेर नै त्यसरी समय होल्ड गरेका हुन् । जन्मँदै मलाई जैवीक शक्ति प्राप्त छ भनेर वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने, शाही कालमा, राजतन्त्र कालमा पनि राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरीकन, कानूनविद्सँग परामर्श नगरिकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिएनन् ।
अहिलेको राष्ट्रपतिले राजाले गरेको त्यो न्यूनतम संसद, राजनीतिक दल र संविधानप्रतिको मर्यादापनि ख्याल गर्नुभएन् । सबभन्दा दुःखद् कुरा चाहीँ यो हो । यसर्थमा मैले भने यी पाँच वटा कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक छ । असंवैधानिक छ । यो अलोकतान्त्रिक पनि छ ।’
अधिवक्ता भट्टराईले गत पुष १८ पछिको नेपालको शासन सञ्चालनलाई अनिर्वाचित सत्ताद्धारा भैरहेको शासनको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘पुष १८ पछिको शासन सञ्चालन जुन छ, त्यो अनिर्वाचित सत्ताद्धारा नेपाली जनता शाषित भैरहेका छौं ।
यो कुरा चाहीँ अलोकतान्त्रिक हो । विगतभनदा यो भीन्न प्रकारको छ । धारा ६६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन ग्रहण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन् ।’
अब सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘इजलाशमा रहनुहुने सबै न्यायाधीशहरुले संविधानको सपथ खानुभएको छ । त्यही संविधानको विपरीत हुनेगरी, आफूले खाएको सपथ विपरित हुनेगरी निर्णय वा फैसला हुनेछ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्दैनौं ।
सम्मानित अदालतले संविधाअनुसार नै फैसला गर्छ । ओलीबाहेक सारा मुलुक यो प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा छ । प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी विरुद्धमा छ । संसारका जुरिष्टहरुले नेपालको घट्ना नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।
संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको प्रतिकुल फैसला गर्छ भनेर हामी कल्पना नगरौं । अदालतबाट विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन्, बरु सरल र सहज व्याख्या हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुन्छ ।’
त्यस्तै, अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको सवालमा अदालतले प्रक्रिया सुरुवात गरिहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘प्रधानमनत्रीले यो सर्वोच्च अदालतमा हामीले गरेको बहसलाई तमासा भन्नुभयो । हामीले गरेको बहस तमासा भयो भने उहाँहरुको बहस पनि तमासा हुनेछ ।
यदि यो तमासा हो भने । यो तमसा हो भने सर्वोच्च अदालतमा नाटक भैरहेको छ । हामी नाटकका पात्र भैरहेका छौं । सर्वोच्च अदालत नाट्यशाला हो । यो सिंगो न्यायपालिकामाथि नाँगो आक्रमण हो ।
धारा ३० मा कानून व्यवसायीले बहस गर्न पाउने व्यवस्था छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आउनु भनेको ठिकै प्रक्रिया हो । तर, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बोालउनु उपयुक्त छैन् ।
उहाँहरुले विज्ञप्तीमा अदालतको अवहेलना हुने केही पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन् । बहसलाई तमासे भन्नुभएको छैन् । उहाँहरुले त स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हो । ओलीको समकक्षतामा राखेर आदेश गरेको छ । म विश्वस्त छु कि पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई दण्ड÷जरिवाना गर्ने फैसला हुँदैन् ।’
वैशाख १७ र वैशाख २७ गतेको निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा नगरिएको पनि उनको दाबी छ । उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्नको लागि मिति घोषणा गरिएको होइन् । अब तोकिएको मिति आउन ८८ वा ८९ दिन बाँकी छ ।
नेकपाभित्रको विवाद निरुपण भएको छैन् । निर्वाचन हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन् ।’ उनले मुलुकयतिवेला शाहीकालीन पालामा जस्तो अध्याँरो सुरुङतर्फ गइरहेकोले अब सर्वोच्च अदालतले अब धमिलो संवैधानिक यात्रालाई सग्लो रुपमा फर्काउने पनि विश्वास दिलाए ।
नेकपाभित्रको विवादको सवालमा उनले निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरलाई आत्मसात् गर्दै निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले कानूनतः निर्णय गर्नेछ । आयोगले नेकपाको संख्या ४४१ निर्धारण गरिदियो । जसले बहुमत पुर्याउछ उसलाई आधिकारिकता दिन्छ । कांग्रेसको विवादमा पनि त्यही लागू भयो । आयोग विगतको अभ्यासविरुद्ध जाने सम्भवा छैन् ।’